Kulankii labaad Clasico Real Madrid vs Barcelona ee Horyaalka Spain Laliga Santander – Walaal24 Newss
Kulankii labaad Clasico Real Madrid vs Barcelona ee Horyaalka Spain Laliga Santander
March 2, 2019	0	By walaal24
Kulanka labaad ee Isbuucaan ayaa dhacaya Caawa oo Sabtida ah mar kale ay Real Madrid martigelineyso Barcelona. Waqtigaan kulankan Santiago Bernabeu wuxuu ku jiri doonaa horyaalka Spain, waxaana uu imaanayaa maalmo kadib markii Barca ay 3-0 kaga badisay Real Madrid si ay ugu soo baxaan finalka Copa del Rey ee bishii May. Midkani waa fursad fursad uu Real Madrid ugu soo laaban karo tartanka horyaalka, iyo Barcelona oo laga yaabo in ay ka soo kabsadaan.
Barcelona ayaa usbuuca soo aadan ku bilaabatay rikoorkeeda 17-6-2 iyo 57 dhibcood, halka Real Madrid ay ku jirto kaalinta 3aad iyagoo leh 15-37 iyo 48 dhibcood.
Halkan waa sida aad u daawan karto ciyaarta iyo waxa la ogaanayo:
Kulanka oo soo galaayo xiliga saacada Geeska Afrika marka ay tahay10:45 PM oo Caawa ah””’
Real Madrid: Indhaha oo dhan waxay noqon doonaan Vinicius Junior. Waxa kaliya uu helay baaqiisii ​​ugu horeysay ee xulka qaranka Brazil, waxaana uu xilli ciyaareedkan si fiican u muuqday.
Dhalinyartiisu way caddahay, laakiin xagjirnimada ayaa jirta. Waxa uu Barca ku dhibtooday labadii kulan ee ugu danbeysay, waxaana uu raadin doonaa goolkiisii ​​halkaan.
Barcelona: Waxa ay aheyd isbuuc waali ah oo Barca ah, lakiin barbaro ayaa halkaan ku dhici doona wax ka badan sidii la aqbali lahaa. Waxyaaba ay tahay, Barca ayaa labo guul gaartay Real xilli ciyaareedkan, iyagoo dhaliyay sideed gool, marka laga soo tago Copa del Rey barbaro 1-1 ah. Barca waa ay ka fiican tahay Real, waxayna arki doonaan inay fursad u helaan inay mar kale ku dhibaateeyaan. Laakiin haddii aysan sidaas samayn, dhib ma ahan. Xitaa khasaare lama gelin doono dhibtaas oo kale, Barca mar kale waxay heshay ugu fiicneyd Real, iyadoo Messi uu dhaliyay gool cajiib ah.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumada Federaalka Soomaaliya oo shir uga qeyb galaya Dalka Kuwait
Mareykanka oo sheegay duqeymo ay u geysteed Saldhig Al shabaab ay ku lahayeen Gobolka Hiiraan
Maxkamada Ciidamada oo xukun ku riday Shaqsi u kala gudbin jiray Hubka kooxda Al-shabaab
Taliyaha Ciidamada Xooga oo xarunta Taliska ku qaabilay saraakiil Sare oo ka socota Dowlada Pakistaan